UNYANA KALEBRON JAMES UBRONNY UZIKHUSELE NGOKUCHASENE NOKUBUYELA UMVA NGENGXELO - IINDABA
UBronny James ‘Ubomi bothando bunokukhawuleza nje ukuba bukhule buphakathi kwengxoxo. Ukulandela amarhe obudlelwane bakhe UDamon Wayans, Omnci. Intombi ka-Amaya, abantu okwangoku bakrokrela ukuba iimbaleki zithandana neenkwenkwezi zemidiya yoluntu uPeyton. Uninzi aluhlali luziva ngothando lwabo oluxeliweyo nangona, becinga ngenyaniso yokuba uPeyton umhlophe.
Amarhe ezothando phakathi kweenkwenkwezi ezi-2 aqala emva kokuba uPeyton ekwabelwana ngeakhawunti yakhe yeTikTok ikliphu yokwenza umzamo wokuba yingxaki yeBop It noBronny. Unyana ka ULebron James wayenokubonakala encumile ngandlela thile njenge Peyton eyonwabele kunye nentloko yakhe. Ndamnyanzela ukuba enze njalo, ke isihloko sokushicilela sifunde.
Abantu baqala ukuthelekelela ukuba ezi-2 ubudlelwane, uninzi lwabo luhlasela uBronny kubudlelwane nenenekazi elimhlophe njengenye indlela yomntu ohlanga olufanayo. Ibuhlungu intliziyo yam yokwazi ukuba kuya kubakho abamhlophe ngaphakathi kwendlu kaJames, nangona kunjalo kunokwenzeka ukuba yonke iBronny ijikelezile, utshilo umntu omnye. Hayi ubudlelwane bukaBronny inenekazi elimhlophe, omnye uvakalise ukudana kwakhe.
Ngethamsanqa ngoBronny, kukho abantu abeza kumkhusela njengoko bejonga ukuba abantu akufuneki bacinge ukuba ngubani umntu othabatha inxaxheba kwi-basketball ulwalamano okwangoku ngenxa yokuba ayisiyiyo ishishini labo. Wonke umntu othetha ngolwalamano lwebronny ngokungathi banentetho kuyo. Hamba uphinde ulale ungatshatanga f ** ok, umntu ubhale. Abantu bayathandana ngobuhlobo noBronny inenekazi elimhlophe. hamba uyokufumana ubomi lmao. Njengokuba uza kuba ngunyana kwaye ade amazi, umntu othile wahlekisa ngabagxeki.
Kukho abantu abadala abasele bekhulile abanemicimbi yokukhula kubomi bokwenyani kule webhusayithi enokuthi ibandakanyeke malunga nokuba ngubani iinyanga ezili-15 ezili-12 eziphelelwe lixesha ubudlelwane. Shiya uBronny James yedwa wena weirdos, omnye washumayela, ngelixa omnye umntu wathi, N *** njengoko befumene i-invoice yokukhanya kwelanga ngenxa yeveki elandelayo bahlala besoyikisa malunga ne-15yr ubudlelwane beBronny obuphelelwe lixesha inenekazi elimhlophe.
UJenny mccarthy unyaka omtsha we-2017
Iminyaka yobudala yobugcisa be-reuben
Isidanga seveki ezi-3 abaphangi
godwink ithuba lesibini
umyeni karen womchweli uTom burris
I-meredith foster net efanelekileyo